Work From Home အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား – K-Link Enterprise Solutions
Work From Home အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား
Home Latest Technology Work From Home အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား
January 6, 2019 Latest Technology
COVID-19 ကြောင့် နိင်ငံတကာရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအများစုဟာ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရပါတယ်။ နိင်ငံတကာရှိ ကုပ္ဗဏီကြီးများသည် ထိုသို့အရေးပေါ် အခြေအနေတွင် မိမိတို့ နေစဉ်လည်ပတ်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို တတ်နိင်သမျှ Business Operations မထိခိုက်စေရန် Business Continuity Plan (BCP) ရေးဆွဲထားပြီး လေ့ကျင့်ထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ လတ်တလော အများစုပြောနေကြတဲ့ “Work from Home” ဟာ BCP ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ့
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိင်ငံက လုပ်ငန်းအများစုက ယခုလိုမျိုး အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုး ကြုံလာလျှင် မိမိတို့လုပ်ငန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ် လုပ်ကိုင်နိင်ရန်အတွက် ရေးဆွဲထားတဲ့ Business Continuity Plan (BCP) တွေ မရှိကြပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့မရှိလဲဆိုတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ ယခုလိုမျိုး အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးကို တစ်ခါမှ မကြုံဖူးတာရယ် နဲ့ မိမိလုပ်ငန်းမှာ မဖြစ်မနေ ရှိသင့်ရှိထိုက် လိုအပ်တဲ့ IT System & Infrastruture တွေမရှိတာတွေကြောင့်ပါ။
COVID-19 ကြောင့် ရုံးတက်ပြီး လူတွေအများနဲ့ထိတွေ့ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိင်ဘူးဆိုပါတော့။ Business Operations တွေကိုလဲ မရပ်ချင်ဘူး၊ “Work from Home” ဆိုတဲ့အတိုင်း ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပါတော့….
သင့်လုပ်ငန်းမှာ နေ့စဉ် Run နေတဲ့ Operations တွေက တကယ်ရော “Work from Home” လုပ်ဖို့ Ready ဖြစ်ရဲ့လား ?
“Work from Home” အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမလဲ ?
ဘယ်လို IT System & Infrastructure တွေရှိဖို့အဓိကလိုအပ်မလဲ ?
“Work from Home” အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ IT System တစ်ချို့အကြောင်း ရှင်းပြပေးပါရစေ
– Unified Business Communication System
မိမိတို့နေ့စဉ် Run နေရတဲ့ လုပ်ငန်း Operations မှာ အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ Commnunication စနစ်တစ်ခုလိုပါတယ်။ ဝန်ထမ်း အချင်းချင်း ဆက်သွယ်တာဖြစ်စေ / Customer / Vendors / Supplier တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရာမှာဖြစ်စေ အရေးကြီးပြီး မဖြစ်မနေ လိုအပ်တဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့လုပ်ငန်းဟာ Unified Communication စနစ်ကို အသုံးပြုပြီး Run နေတဲ့ Organization ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ Unified Communication ကို အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် နေ့စဉ် ရုံးမှာလူချင်းတွေ့ပြီး Meeting လုပ်ပြောဆိုတာတွေ / Task တွေ Assign ချတာတွေကို Online ပေါ်တင်ပြီး Run တာကိုပြောတာပါ။
Department အလိုက်ဖြစ်စေ / Team အလိုက်ဖြစ်စေ / Group Instant Messaging Chat လုပ်ပြီး ပြောဆိုတာတွေ ။ Video Conferencing Meeting လုပ်တာတွေကို တစ်နေရာတည်းက သုံးလို့ရတဲ့ Communication စနစ်တစ်ခုပါ။
“Work from Home” လုပ်ပြီဆိုပါတော့။ မိမိကုပ္ဗဏီ ရုံးဖုန်းကို ဆက်သွယ်တဲ့သူတွေ ရှိနေမယ်။ ရုံးမှာ ဖုန်းကိုင်မယ့်သူ မရှိဘူး….. အဲဒါဆိုရင်တော့ Business Operations ဘယ်လိုမှ Run လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး
Unfied Communication စနစ်ကို အသုံးပြုထားမယ်ဆိုရင် မိမိရုံးဖုန်းကိုဆက်သွယ်လာမယ့် ဖုန်း Calls တွေအကုန်လုံးကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းရဲ့ Mobile Phone သို့မဟုတ် Laptop ထဲကို အင်တာနက် ပေါ်ကနေတစ်ဆင့် VoIP PBX System ကို အသုံးပြု ပြီးဖုန်း Calls တွေ လွဲထားလို့ရပါတယ်
ဆိုလိုတာက Office Reception မှာ ထိုင်တဲ့ Receptionist ဝန်ထမ်းသည် ရုံးဖုန်းကို ဝင်လာတဲ့ ဖုန်း Calls အားလုံးကို အိမ်ကနေ ထိုင်ဖြေပေးလို့ရတဲ့အပြင် ဖုန်း Calls တွေ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတွေဆီ ဖုန်းလွှဲပေးနေလို့ရပါတယ်။
– Hybrid Cloud Centralized Storage Server
Centralized Data Storage Server ကလည်း ယနေ့ခေတ် လုပ်ငန်းအများစုအတွက် မဖြစ်မနေ အရေးတကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ Data အားလုံးကို Server ပေါ်မှာ တစ်စုတစ်စည်းတဲ သိမ်းဆည်းထားဖို့အပ်ပါသည်။ သို့မှသာ မိမိလုပ်ငန်း၏ အရေးကြီး Data များ လုံခြုံစွာ ရှိနေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အဲဒီ Data Storage Server ကို အင်တာနက်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီး မိမိအိမ်ကနေ လှမ်းဝင်ပြီး အသုံးပြုလို့ရအောင် လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့မှသာ “Work from Home” ဆိုတဲ့အတိုင်း မိမိအိမ်ကနေ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိင်မှာပါ။
– Enterprise Networking & Security System
နေ့စဉ် Run နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အင်တာနက်ပေါ်ကနေတစ်ဆင့် ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုရတာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိ ရုံးမှာရှိတဲ့ IT Infrastructure & Networking စနစ်ဟာ လုံခြုံစိတ်ချရပြီး အထူးကောင်းမွန်စွာ Run နေဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ Core Networking စနစ်ကိုသက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် စနစ်တကျ တပ်ဆင်သင့်ပြီး လိုအပ်တဲ့ Security System ဖြစ်တဲ့ Firewall တွေ End Point Security System တွေ ၊ Data Storage & Backup Facilties တွေကို Up to Date ဖြစ်နေအောင် ထားရှိသင့်ပါတယ်။
COVID-19 ကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် မြန်မာနိင်ငံရှိ လုပ်ငန်းများအားလုံး စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိင်ပြီး အခက်အခဲများဖြတ်ကျော်နိင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးအပ်ပါတယ်။
K-Link Enterprise Solutions Co.,Ltd.
Hotline – 09 4444 91915
Website – www.klinkenterprise.com